umbuzo Emirates Fleet A380
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #761 by Aidablu1508
Sawu, ndizama ukufaka iilveries kwi-Emirates Fleet iphakheji kwi-A380, kodwa i-liveries ayibonakali okanye iVC ayisebenzi, yintoni endiyenzayo, ngaba unokuncedisa ..
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #762 by Dariussssss
Into efanayo yenzeke kum. Inento enokuyenza ngayo ngenguqu yalo, kuba uyazi ukuba kukho iinguqu ezimbini ze 841 kunye ne-861, enye eneRR kunye nezinye nge-EA GP2700, kwaye kufuneka uxoke kuwo, kufuneka wenze i-aircraft icinge ukuba yonke iilvery uyifake yile. Sebenzisa nje ikhowudi ye-skin Emirates, ukufaka ezinye iilveries. Kufuneka isebenze.
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #763 by Aidablu1508
Ndiyabulela kakhulu, oko kusebenze, ndiqala ukukhupha iinwele kunye nezipikili ukuze kusebenze oku
iinyanga 1 kunyaka 4 eyadlulayo #780 by jck003
uzame kwaye ulayishe kwakhona
Ixesha ukwenza page: 0.390 imizuzwana